Mugabe's Zanu PF has failed workers 2 May 2016 HARARE - Yesterday, Zimbabwe joined the rest of the world in commemorating Workers’ Day but there was no euphoria, no great expectations as the governing Zanu PF has destroyed whatever working force that we once had. It is common knowledge that less than 20 percent of the country’s population ...
New year, same old problems 5 January 2016 HARARE - Although it is a brand new year, we are still in the same predicament and all the past year’s problems have reappeared. It is indeed sad that after hopping from one crisis to another, clinging on to hope whenever backed against the wall, Zimbabweans will likely be haunted by the same ...
Return home, Mugabe told 2 January 2016 HARARE - Opposition leader Morgan Tsvangirai has implored President Robert Mugabe to cut short his overseas holiday and return home to attend to the country's mounting economic crisis and threats of mass starvation. Speaking to the Daily News yesterday after witnessing first hand “the terrible...
Santa Claus evades Zim 22 December 2015 HARARE - Christmas cheer seems to have bypassed Zimbabwe this year with most families finding themselves with empty pockets and barely enough to survive another day let alone think of organising a festive party. In a year where an unprecedented number of companies collapsed and thousands of jo...
Mugabe can't solve Zim's problems 14 September 2015 HARARE - President Robert Mugabe's appointment of new 14 ministers to his bloated Cabinet at a time the country is reeling from acute liquidity challenges — spawned by lack of productivity and huge trade deficit — is the final nail in the coffin for the moribund economy. Mugabe, battling inter...
Job exports expose Mugabe 10 September 2015 HARARE - The Zanu PF-led government this week brimmed with joy that at least 8 000 graduates from the country's tertiary institutions have applied to be placed on database for job placements abroad when opportunities arise. For a country that boasts of having an official unemployment rate of 1...
Mugabe's economic plan doomed: Dabengwa 4 September 2015 BULAWAYO - Zapu president Dumiso Dabengwa has said President Robert Mugabe does not seem to have a strategy for extricating the country from its parlous economic state. Briefing journalists at his party offices here yesterday in response to Mugabe's recent State of the Nation Address (SONA), D...
Mugabe out of touch with reality 31 August 2015 HARARE - President Robert Mugabe’s continued attacks on political rivals at a time the economy is imploding, is a sure sign that he is out of depth with issues confronting Zimbabwe. No one expects the president to insult both the dead and the living when there are pressing issues that need his...
Mugabe's govt faces shut down 31 August 2015 HARARE - As Zimbabwe's economic meltdown accelerates, a catastrophic shutdown of important government functions is looming, with insiders telling the Daily News on Sunday yesterday that the cash squeeze that has been crippling the fiscus over the past two years has now reached a “crisis” point. ...
MDC supporters protest against economic hardships 29 August 2015 CHIENDAMBUYA - Hundreds of villagers took to the streets of this rural outpost yesterday to protest against what they say is the government’s mishandling of the economy. The demonstration was organised by Zimbabwe’s biggest opposition party (MDC) and was the first protest here since President ...